IIMUVI EZIPHAMBILI KWIDISNEY PLUS UKUBUKELA NGOKU E-UK (NGOMEYI 2021) -RADIO TIMES - YINTONI-UKUBUKELA
Iimuvi ezigqwesileyo kwiDisney Plus yase-UK ukubukela ngoku
Ukusuka kwiscreen blockbusters ukuya kwiDisney Plus yokuqala, nazi ezona bhanyabhanya zibalaseleyo zobude ezingaphoswa.
Ngelixa izithintelo eNgilane ziqala ukuba lula kwaye iivenkile ezingabalulekanga ziqala ukuvuleka, ngelishwa iingcango zeemovie zenyuka kwaye ezantsi ilizwe lisavaliwe- kodwa oko akuthethi ukuba asizukufumana zilungiso Iifilimu zakutshanje ze-blockbuster!
Abasasazi abanjengoDisney Plus balapha ukugcina usuku, besandisa ngokuthe rhoqo ingqokelela yeemovie ukuze sikhethe kangangoko kunokwenzeka xa sikhetha into esiza kuyibukela ngoLwesihlanu ebusuku.
Ngelixa sinama-premieres azayo ekufuneka sijonge kuwo, njengeMarvel's Umhlolokazi omnyama eya kufumaneka njenge Ukufikelela kweNkulumbuso yeDisney Plus kuthengwe ngoJulayi kunye URaya kunye neNamba yokugqibela , kunye neyongezelelweyo Umxholo weDisney + Star Ngoku, sinokufikelela kwiiflick zakudala ngokunjalo.
Ukubuyiswa kuka-Steve kaMtshakazi ka-Steve Martin's's 90s is now available to stream eceleni Absolutely Fabulous: Umboniso bhanyabhanya, ngelixa idrama yomculo uMoulin Rouge kunye ne-sci-fi epic Day Independence ikwakhona ukusasaza xa sele ukulungele.
Ngeendlela ezininzi zokukhetha, siye saphula iifilimu zethu eziphezulu kwiqonga loluhlu, oluhlaziywa ngamangeniso amabini amatsha ngeveki.
Ukuhlaziywa kokugqibela: 7 Meyi 2021
Bhalisela iDisney Plus nge- $ 7.99 ngenyanga okanye nge- £ 79.90 ngonyaka ngoku
Iimuvi eziphambili kwiDisney Plus e-UK
Siqokelele ezinye zezona zikhetho zethu eziphezulu ukukunceda ukhethe ukuba ubukele ntoni, kodwa skrolela ezantsi kuluhlu olupheleleyo ngefranchise; ukusuka kwi-Star Wars ukuya kwi-Marvel kunye ne-Pstrong.
Le ngqungquthela yasekhaya yaseSteve Martin yinto yakudala yama-90s- kwaye iyafumaneka ngoku ukuba usasaze kwiDisney Plus. UMartin odlala indima ephambili njengosomashishini ophumeleleyo waseCalifornia uGeorge Banks UYise woMtshakazi Ulandela iiBhanki 'njengoko befumanisa ukuba intombi yabo eneminyaka engama-22 ubudala u-Annie (Kimberly Williams) uganene nendoda eyaziwayo iinyanga ezintathu kwaye ilungiselela umtshato wakhe ozayo.
Ukubuyiswa kwakhona kwefilimu yeli gama yango-1950, uYise woMtshakazi sishushu esokufudumeza intliziyo esenza imiboniso emihle kakhulu evela kuDiane Keaton, Kieran Culkin, Martin Short kunye no-BD Wong.
Inkwenkwezi: Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, BD Wong, Kieran Culkin
Ngokuqinisekileyo ulungile: Umboniso bhanyabhanya
Ikhulu lama-20 leFox
Iminyaka elishumi elinesibini emva kokuhlala kwe-BBC Ngokuqinisekileyo intle ifikelele esiphelweni, u-Edina Monsoon kunye noPatsy Stone benze umboniso bhanyabhanya omkhulu kule bhanyabhanya ka-2016, neyabona uninzi lwabadlali bokuqala bephindaphinda iindima zabo abazithandayo kwimizuzu engama-90 yolonwabo olungangxengwanga.
Umlingisi uJennifer Saunders noJoanna Lumley njengeziselo ezinxilisayo uEdina Monsoon kunye noPatsy Stone, Abamnandi ngokugqibeleleyo: Umboniso bhanyabhanya uthatha esi sibini, ngoku sikwiminyaka yama-60, esiya kumsitho wefashoni ngethemba lokuba uPatsy angangummeli omtsha we-PR kaKate Moss. Nangona kunjalo, xa ngengozi i-duo yankqonkqoza i-supermodel kuMlambo iThames, bathatha isigqibo sokubaleka kweli lizwe ukuze babalekele amapolisa kunye noonondaba ngelixa bekhangela uKate ngokwabo. NgoJulia Sawalha, uJane Horrocks noJune Whitfield bebuyela kwifilimu nakwii-cameo ezivela kubantu abaninzi abadumileyo, eli hlaya lihlekisayo libuya linomtsalane kubalinganiswa abaziwayo uEdina noPatsy, kwaye liwotshi elonwabisayo kakhulu kubathandi bohlelo lwantlandlolo.
Umdlali weqonga: UJoanna Lumley, uJennifer Saunders, uJulia Sawalha, uJane Horrocks, uJuni Whitfield
URaya kunye neNamba yokugqibela
Ukulandela ukhokelo lukaMulan, URaya kunye neNamba yokugqibela zitsibile ii-cinema ngokupheleleyo kwaye zifumaneka kuphela kwiNkulumbuso yokuFikelela de ibe simahla kubabhalisi ngomhla we-4 kuJuni ka-2021. Sukuvumela ixabiso le- £ 19.99 likubeke ecaleni, nangona kunjalo-ifilimu luhambo olubonakalayo oluhle ngokulandela uRaya (Kelly Marie Tran) njengo Ukhangela inamba yokugqibela esindayo kwindawo yobumnandi yaseKumundra.
Umdlali weqonga: UKelly Marie Tran, u-Awkwafina, u-Izaac Wang, uGemma Chan, uDaniel Dae Kim
Iintyatyambo kunye neeUlysses
I-duo elandelayo edumileyo yesikrini iphezu kwethu-kwaye ewe, enye yazo yingwele enkulu. Ngokusekwe kwinoveli yabantwana ethandekayo enegama elifanayo, iFlora kunye ne-Ulysses zilandela intombazana eneminyaka eli-10 ubudala ukuba ibe ngumhlobo womatse ojika abe namandla amakhulu, ekhokelela kuzo zonke iintlobo zobungangamsha. Inye lonke usapho.
Inkwenkwezi: Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Benjamin Evan Ainsworth, Danny Pudi
Umdlalo weqonga womculo ka-2001 ovela kwiinkwenkwezi zikaBaz Luhrmann uNicole Kidman njengomdlali weqonga othanda imbongi encinci edlalwa ngu-Ewan McGregor kwikota ye-Montmartre eParis.
Ipakishwe izele ziingoma zanamhlanje kunye ne-mash-ups, eli bali lemidlalo yothando liya kuba yindebe yakho yeti ukuba ungumlandeli weLuhrmann's Strictly Ballroom, iRomeo + uJuliet kunye neGreat Gatsby, kunye nomdlalo ophumeleleyo ophuma kuKidman, McGregor kunye noJim Broadbent.
Inkwenkwezi: UNicole Kidman, uEwan McGregor, uJim Broadbent, uJohn Leguizamo, uRichard Roxburgh
I-classic sci-fi epic evela ku-Roland Emmerich, iinkwenkwezi zoSuku lweNkululeko uWill Smith njengoKapteni Steven Hiller, umqhubi wenqwelomoya kunye nomnqweno we-astronaut okhokela kuhlaselo lwabaphambukeli abahlaselayo besoyikisa ubukho boMhlaba.
Ndikunye noBill Pullman, uJeff Goldblum, uMary McDonnell, uJudd Hirsch kunye noHarvey Fierstein ababumba le blockbuster yango-1996, uSuku lweNkululeko lubalulekile ekubukeni kwabo babonwa ngumoya wangaphandle.
Inkwenkwezi: Ngaba uWill Smith, uBill Pullman, uJeff Goldblum, uMary McDonnell, uJudd Hirsch, uMargaret Colin, uRandy Quaid
Uhlengahlengiso lwenoveli ye-dystopian kaJames Dashner ye-Maze Runner yenye yeefilimu ezaziswa kwiDisney Plus ngeNkanyezi.
Kudlala uDylan O'Brien, umboniso bhanyabhanya wokuqala kwifranchise ulandela uThomas oneminyaka eli-16 ubudala ovuka engenankumbulo yokuba ungubani embindini we-maze ezaliswe lolunye ulutsha oludidekileyo. I-adventure ye-sci-fi egcwele ukujika okumnyama nokungalindelekanga, iMbaleki yeMaze igqibelele kwabo basabethayo Imidlalo yokulamba kunye neeDrigentgent franchise eziphelayo.
Inkwenkwezi: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Patricia Clarkson
Eli xesha limnyama elihlekisayo elivela kwiLobster's Yorgos Lanthimos yiwotshi eyomeleleyo kodwa enomvuzo, ubukhulu becala ukuya kumdlalo ophumelele u-Oscar ogqwesileyo u-Olivia Colman.
Ukusekwa ngo-1711, iNtandokazi ibheka inkundla yasebukhosini ka-Queen Anne kunye nokulwa phakathi kwabazala ababini, uDuchess Sarah waseMarlborough (uRachel Weisz) no-Abigail Masham (uEmma Stone), njengoko bekhuphisana ukuba babe yintandokazi yeKumkanikazi.
Inkwenkwezi: UOlivia Colman, uRachel Weisz, uEmma Stone
IKarimesi yeKrisimesi kaMuppet
Ukujonga uxinzelelo ekuye kwafuneka sonke silunyamezele mva nje, uyakuxolelwa ukuba ubufuna ukungena kumoya wefestile kwangethuba - kwaye ayikho enye indlela ebhetele yokwenza oko ngokuhlala phantsi okuhle Imuvi yeKrisimesi .
Ngethamsanqa, iDisney Plus likhaya lezona zibalaseleyo, kubandakanya isimemo esimangalisayo sikaMimpet Christmas Carol sikaJim Henson, nesisahlala sesona silungelelwaniso silungileyo sebali lesiporho likaCharles Dickens.
UMichael Caine uyinkwenkwezi njengo-Ebenezer Scrooge ozingcayo, otyelelwa ziziporho ezintathu ngobusuku bosuku lweKrisimesi ezifuna ukuba atshintshe iindlela zakhe, hleze ohlwaywe emva kokufa.
IGreat Gonzo yeyona ndawo ibalaseleyo njengoko umbalisi uCharles Dickens, uKermit kunye noNkosazana Piggy bebonisa ukuthotywa kwethamsanqa labo, kunye nenani labanye oopopayi abaqhelekileyo.
Libali elikhuthazayo ngezinye zeengoma ezithandekayo kunye nokuhleka okukhulu kulo lonke; IKrismesi ibingazukufana ngaphandle kwayo.
Iimbalasane: UMichael Caine, uSteven Mackintosh kunye neMuppets
Pstrong's Phambili kulandela abantakwabo Elf u-Ian (Tom Holland) no-Barley (uChris Pratt) xa beqala uhambo lwabo lokufumana ilitye lemilingo eliza kubavumela ukuba bachithe usuku olunye nangotata wabo ongasekhoyo… okanye imilenze yakhe.
Xa umama wabo uLaurel eqonda ukuba balahlekile, udibanisa iqela kunye nesidalwa-ingonyama, i-bat kunye ne-scorpion egama linguManticore ukubafumana.
Ukuchukumisa, ukuhlekisa kunye nokugcizelela oopopayi, ukuqhubela phambili kuthwala zonke iimpawu zefilimu yePstrong, kodwa okwangoku ikwazokuma ngeenyawo zayo zombini (akukho pun ejoliswe kuyo).
Inkwenkwezi: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Mel Rodriguez, Kyle Bornheimer
I-albhamu ebonwayo yakutshanje evela kwimvumi uBeyonce ifike ngokukodwa kwiDisney Plus kwaye yagxeka abagxeki ngemixholo yayo enamandla kunye nemifanekiso.
Inxalenye ephefumlelweyo yimbali yeNgonyama yeNgonyama, eli bali lilandela inkosana esencinci eyayigxothelwe ebukumkanini bayo emva kokusweleka kukayise, oqhubeka nohambo olunzulu olumnika amandla okubuyisa itrone.
Ifilimu enamabhongo yaveliswa kwisithuba sonyaka kumazwekazi amathathu, ngemidaniso engakholelekiyo, izinxibo kunye neeseti ezibonisa ubuhle belizwekazi laseAfrika.
Inkwenkwezi: Beyoncé, Folajomi Akinmurele, Nyaniso Ntsikelelo Dzedze, Nandi Madida
Ngokusekwe kwinoveli kaJack London ka-1903 yeli gama linye, I-Call of the Wild ilandela uBuck, umnqamlezo wase-St Bernard obomi bakhe obuzolileyo eCarlifonia enelanga lisuswe xa wayexhwilwa wathunyelwa e-Alaskan Yukon. Ngokukhawuleza udibana no-John Thornton yedwa ( UHarrison Ford ), umda onamava kwaye aba babini baya kwenza isibophelelo esomeleleyo ngelixa befumana amava obomi.
I-Call of the Wild yinto ekhuthazayo evuselelayo yenoveli yaseLondon yeklasikhi, kunye nokusebenza okumileyo okuvela kwiFord enefratsi ebotshelelwe ukwenza nayiphi na inja ethanda inyembezi okanye iinyembezi.
Inkwenkwezi: UHarrison Ford, u-Omar Sy, uCara Gee, uDan Stevens, uKaren Gillan, uBradley Whitford
I-gothic romance yefantasy kaTim Burton isenokungabi yinto yokuqala ethi qatha engqondweni yakho xa ucinga ngeDisney, kodwa ifilimu ibandakanyiwe eqongeni ngenxa yokuthatha i20th Century Fox - istudiyo esisemva kwale movie.
Ekhutshwe emva ngo-1990, u-Edward Scissorhands uhlala enye yeefilimu zeBurton kunye neyona nto ibalulekileyo UJohnny depp , odlala i-titular synthetic man, eyenzelwe ulwaphulo-mthetho angalwenziyo emva kokuba ethathwe ngumfazi othengisayo onobubele, ngelixa ethandana nentombi yakhe.
Okungaqhelekanga kunye nokungenakulibaleka, inkcazo elula yale filimu ekhangayo ayinakuyenza ngokufanelekileyo, kwaye kukho isizathu esivakalayo ngoku ithathwa njengesiqhelo se-bonafide.
Inkwenkwezi: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price kunye noAlan Arkin.
Ikhaya eliLodwa linokuba yifilimu yeKrisimesi, kodwa masinyaniseke- yenye yeefilimu ezithuthuzelayo onokuzibukela ngovuyo nangaliphi na ixesha lonyaka, kwanaphakathi ehlotyeni!
Iinkwenkwezi zikaMacaulay Culkin njengomntwana oneminyaka esibhozo oshiyekileyo ukuba azimele xa usapho lwakhe ngengozi luye eholideyini ngaphandle kwakhe, kodwa ukonwaba kwakhe ekubeni nendlu iphela kuye kuyancipha xa ezifumanisa elwa namabini amasela angafanelekanga idlalwe nguJoe Pesci noDaniel Stern.
Kubekho ukulandelelana okuninzi ukusukela- kunye a Ukucwangciswa kwechungechunge lweTV I-Disney Plus okwangoku isebenza - kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho nto isondela kumlingo kunye nobushushu boqobo lwango-1990.
Umdlali weqonga: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard noCatherine O'Hara
Isenzo sokulindela isenzo esiphilayo sodidi oluphezulu Mulan ekugqibeleni bafika kwinkonzo ngo-Septemba emva kokulahla ukukhutshwa kwe-cinema.
Njengama-90s okuqala, umntu ophambili ongoyikiyo kufuneka azenze umntu ukuze asindise utata wakhe ogulayo ekusebenzeni kwi-Imperial Army, esilwa nabahlaseli basemantla e-China kule nkqubo.
Kodwa nangona kukho ukufana, zininzi iinguqulelo ezivela kwinto yoqobo ngokunjalo - awuyi kufumana nabaphi na abahlobo bethetha nenamba okanye iinombolo zomculo kolu hlengahlengiso olunamandla ngakumbi, olunikwe umlinganiso weminyaka eyi-12A.
Inkwenkwezi: Yifei Liu, Donnie Yen, Tzi Ma, Jason Scott Lee, Yoson An, Ron Yuan, Gong Li, noJet Li
Ilizwi eligqwesileyo elibandakanya uWill Smith, uTom Holland, uRashida Jones kunye noBen Mendelsohn babolekisa amazwi abo kule vidiyo yoopopayi malunga nentlola enkulu kunye nososayensi abanyanzelwa ukuba basebenze kunye nangona ubuntu babo buchasene ne-polar.
Xa ulingelo lwesayensi luhamba gwenxa, umhloli (uSmith) ngengozi wajika waba lihobe-yiyo loo nto Iintlola ezifihlakeleyo -Kwaye aba babini kufuneka benze konke okusemandleni abo ukukhusela i-cybernetic terrorist ekubeni ifune ukuziphindezela, ngelixa izama ukubuyisela iarhente kwimo yayo yobuntu.
Amanqaku aphambili: UWill Smith, uTom Holland, uRashida Jones, uBen Mendelsohn, uReba McEntire, uRachel Brosnahan, uKaren Gillan, uDJ Khaled kunye noMasi Oka
Inye kunye no-Ivan kuphela
UBryan Cranston. Inja elahlekileyo evakaliswe nguDanny DeVito. Imithombo yolwazi lweStellar. Inye kunye no-Ivan kuphela, imovie entsha yeDisney Plus ebukhoma okuninzi Yiya kuyo. Kwaye nangaphambi kokuba singene kwifilimu yokukhala kweyelenqe.
Ilandela igorila egama linguIvan (evakaliswe nguSam Rockwell), uStella indlovu (uAngelina Jolie) noBob inja (iDeVito) abahlala kwikheyiji ephezulu kwintengiso yaseMelika. Abakhumbuli ukuba bafika njani apho, kodwa bayazi ukuba le mall yeyakwaMack ( UBryan Cranston ).
Nangona kubonakala ngathi banelisekile bubomi, kukho into etshintsha eIvan xa uRuby, indlovu ephethwe gadalala yajoyina iqela. Njengoko i-synopsis isitsho, ibangela ukuba abuze ngobomi bakhe, ukuba uvelaphi kwaye ufuna ukuba phi.
Inkwenkwezi: USam Rockwell, uBryan Cranston, uAngelina Jolie, uDanny DeVito, uHelen Mirren, iBrooklynn iNkosana, uChaka Khan kunye noRon Funches
Hamilton -Umculo weLin-Manuel Miranda othathe umhlaba ngoqhwithela - ufikile kwiDisney Plus kubo bonke abalandeli beqonga ukuze babone. Inguqulelo yefilimu yoqobo yemveliso ebanzi ibalisa ibali likaBawo waseMelika oSungula UAlexander Hamilton (UMiranda), ukusuka emtshatweni wakhe ukuya ku-Elizabeth Schuyler (Phillipa Soo) kunye neenzame zakhe zokulwa iBritane kwimbambano yakhe no-Aaron Burr (Leslie Odom Jr.) kunye nokufa kwakhe ekugqibeleni. Ngengoma yeengoma ze-hip-hop ezichaphazelekileyo, uya kushiyeka wanelisekile ngulo mculo uphumelele iTony Award. Ukuba awuqinisekanga konke, jonga RadioTimes.com ‘S Uphengululo lukaHamilton .
Umdlali weqonga: uLin-Manuel Miranda, uPhillipa Soo, uLeslie Odom Jr., uRenée Elise Goldsberry, uChristopher Jackson, uDaveed Diggs, u-Okieriete Onaodowan, u-Anthony Ramos, uJasmine Cephas Jones, uJonathan Groff.
Oodade abaculayo baseArendelle babuyile kule ndlela yomlingo kwiDisney's smash hit Frozen. Kukhutshwe kunyaka ophelileyo, uFrozen II ubona uAnna (Kristen Bell), uElsa (Idina Menzel), uKristoff (Jonathan Groff) kunye no-Olaf (Josh Gad) bayangena kwindawo engaziwayo ukuze bafunde ngemvelaphi yamandla omkhenkce kaElsa. Ngomculo onesandi esimnandi njengowandulelayo, lo mculo uphilayo uya kukungcungcuthekisa emva kokuba ugqibile ukubukela. Cofa apha ukuze ufunde uhlolo lwethu lweFrozen II.
Inkwenkwezi: UKristen Bell, u-Idina Menzel, uJosh Gad, uJonathan Groff, uSterling K. Brown, uEvan Rachel Wood, uAlfred Molina, uJason Ritter kunye noMartha Plimpton.
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Ukunyuka kweSkywalker
Kwisahlulo sokugqibela se-Star Wars saga, uRey (Daisy Ridley), uFinn (uJohn Boyega), kunye noPoe Dameron (u-Oscar Isaac) bakhokelela kuKuchasa ngokuchasene noKylo Ren kunye noMyalelo wokuQala kube kanye. Ungalindela iziza ezihamba ngokukhawuleza, isenzo esininzi kunye nobuso obuninzi obuqhelekileyo, ukusuka kwiifilimu ezindala nezintsha. Jonga into oyenzayo kwifilimu yokugqibela ngokusasaza ngoku okanye ufunde uphakama lwethu Ukuphononongwa kweskywalker.
Abalingisi: UDaisey Ridley, uJohn Boyega, u-Oscar Isaac, uCarrie Fisher, uMark Hamill, uAdam Driver, u-Anthony Daniels, uNaomi Ackie, uDominhall Gleeson, uRichard E. Grant noLupita Nyong'o.
Maleficent: Inkosikazi yobubi
U-Angelina Jolie ubuyile kwindima yakhe ekhazimlayo Disney kaMaleficent 2 eyaphehlelelwa kwiDisney Plus nge-15 kuCanzibe. Ukulandelelana kwefilimu yokuqala kusetelwe iminyaka emihlanu, apho uAurora (Elle Fanning) elawula njengoKumkanikazi noMaleficent njengomkhuseli. Emva kokumkanikazi ovela kubukumkani obuselumelwaneni baceba uMaleficent, uyabaleka kwaye azifumane edibana nezinye iifiriji ezifihle ebantwini. Kodwa ngaba ukuphela komzabalazo wabo kuya kuba luxolo okanye imfazwe?
Umdlali weqonga: UAngelina Jolie, uElle Fanning, uMichelle Pfeiffer, uChiwetel Ejiofor, uEd Skrein, uDavid Gyasi, uJenn Murray, iTempile kaJuno, uLesley Manville kunye noImelda Staunton.
Kwimeko apho ukunyuka i-granite ye-3,000 yeenyawo i-El Capitan eludongeni eCalifornia kwakungekho nzima ngokwaneleyo, iimbaleki ezigabadeleyo uAlex Honnold uthathe isigqibo sokuthatha i-feat ukuya kwelinye inqanaba ngo-2017: wazama ngaphandle kwentambo.
Ngoba? Yiloo nto kanye le documentary engena kuyo. Ngelixa ibonisa isikhonkwane sokuluma isikhonkwane uqobo-esichazwe ngabaninzi njengeyona mpumelelo iphambili kwezemidlalo kwimbali yoluntu-I-Solo yasimahla inikezela ukubonakaliswa okusondeleyo kuka-Honnold, etyhila amanqanaba okuphambana awenzayo ukuze afezekise ubomi. Ukubukela okumangazayo kunye nokumangalisayo ngokweemvakalelo.
Inkwenkwezi: UAlex Honnold
I-Rogue One: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi
Cwangcisa iintsuku phambi kwe Star Wars Isiqendu IV: Ithemba elitsha, le adventure ye-anthology ebekwe kumnyele okude kakhulu iphonononga ibali likaJyn Erso, ibanjwa loBukhosi elikhululwe luvukelo. Ukubukeka okumangalisayo kunye nokubonisa uDarth Vader kweyona yoyikeka kakhulu, uRogue One uthathelwa ingqalelo ngabalandeli abaninzi njengeyona nto ibalaseleyo kwisihloko se-Star Wars senkulungwane yama-21.
Umdlali weqonga: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen, kunye neHlathi Whitaker.
Into yenkcubeko kunye nefilimu ephezulu kakhulu kwihlabathi liphela phantse ishumi leminyaka, I-Avatar yayiyimiboniso ebonakalayo xa yayikhutshwa ngo-2009 Zine sequels endleleni, lixesha elihle lokuphinda ubuyele ePandora, ilizwe lasemzini ngokungagungqiyo elimbiwa ngezixhobo ngabantu.
Inkwenkwezi: USam Worthington, uZoe Saldana, uStephen Lang, uMichelle Rodriguez, kunye noSigourney Weaver
Inenekazi kunye neTramp
Disney, inqwelwana, https://www.youtube.com/watch?v=A2ZDDU34gYw
Ayisiyiyo kuphela le nto yokuphinda inyuse isenzo se-Disney sika-1955 sopopayi esiza nezwi eliquka uTessa Thompson noJustin Theroux, kodwa igcwele ngokupheleleyo. Ayisekho eParis isenzo siya eNew Orleans. Ukuba Inenekazi kunye neTramp I-remake ikushiya ujinga emva koqobo ungakhathazeki, kukho iNenekazi kunye neTramp (1955 yoqobo) ukubukela kunye neLady kunye neTramp II: I-Scamp's Adventure.
Umdlali weqonga: UTessa Thompson, uJustin Theroux, uJanelle Monáe, kunye noSam Elliott
I-Disney Plus yoqobo, eli libali eliyinyani le-epic adventure yaseAlaska eyenziwe nguLeonhard Seppala ( Indoda yesigcawu 'UWillem Dafoe) kunye nenja yakhe, Togo, ebusika obunobuqhophololo bowe-1925. Umsebenzi wokuchola isitofu sokugonya esidingeka kakhulu eli bali lilula ligcwele iintliziyo.
Inkwenkwezi: UWillem Dafoe, uJulianne Nicholson, uChristopher Heyerdahl, uMichael Gaston, uMichael McElhatton, uJamie McShane, uMichael Greyeyes
Izinto ezili-10 endizithiyileyo ngawe
Disney / Ilitye lokuchukumisa
Ifilimu ephumeleleyo yeenkwenkwezi uJulia Stiles, uHeath Ledger kwaye UJoseph Gordon-Levitt, le rom-com ikwishumi elivisayo enomtsalane kukuphinda-phinda okuchazayo kweShakespeare's The Taming of the Shrew ngo-1990s kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo sase-US.
Kudlala uJulia Stiles, uHeath Ledger, uJoseph Gordon-Levitt, kunye noLarisa Oleynik
IPirates yeCaribbean: Isiqalekiso sePerile emnyama
Ifilimu ethe yazisa umhlaba kwi-pirate eyi-rough-around-the-pirate uCaptain Jack Sparrow nokunye okuninzi: kunye nokukhaba ukuqala enye yezona franchise zikhulu kwi-cinema, eyokuqala IPirates yeCaribbean I-adventure iphose ababukeli ebalini lezothando, isenzo kunye nenqanawa ye-undead.
Umdlali weqonga: UJohnny Depp, uOrlando Bloom, uKeira Knightley kunye noGeoffrey Rush
Iyafumaneka ukubukela kwiDisney Plus:
IPirates yeCaribbean: Ekupheleni kwehlabathi
IPirates yeCaribbean: Isifuba somntu ofileyo
AmaPirati aseCaribbean: Abantu abafileyo abaxeleli mabali
AmaPirati aseCaribbean: KwiiTide eziMbi
Nangona kuphuma uphononongo oluxubekileyo ekukhululweni kwayo ngo-1963, oku kubaliswa kwakhona kwimbali ka-King Arthur ngoku kukhunjulwa ngothando ngabalinganiswa bayo abathandekayo-kubandakanya noMerlin ongenanto. Kwaye nge isenzo sokuphinda senziwe endleleni, ngokuqinisekileyo sicebisa ukukhupha eyokuqala.
Abadlali beenkwenkwezi: URickie Sorensen, uKarl Swenson, uJunius Matthews, uSebastian Cabot, uNorman Alden, noMartha Wentworth
Ukungaphumeleli kukaTimmy: Iimpazamo zenziwe
Enye i-Disney Plus yoqobo, olu tshintsho lwencwadi ethengiswa kakhulu enegama elifanayo kulandela ukusilela kukaTimmy omncinci, yena, kunye ne-1,500 yeepawundi zebhere yeqabane lakhe elipheleleyo abasebenza kwiarhente yomcuphi.
Inkwenkwezi: Winslow Fegley, Ophelia Lovibond noCraig Robinson
IZootopia (AKA: Zootropolis)
Ukubamba iipesenti ezingama-98 zokuvunywa kweetamati ezibolileyo, eli bali lezilwanyana lithathe ngaphezulu kweebhiliyoni zeedola kwibhokisi yeofisi xa yakhutshwa ngo-2016. Ngokukhawuleza, ehlekisayo kwaye echukumisa ngokunyanisekileyo ngamanye amaxesha, iZootopia ingena kubomi bepolisa elitsha lomvundla uJudy. I-Hopps, othe nje wenza isixeko esikhulu esixekweni.
Inkwenkwezi: UGinnifer Goodwin, uJason Bateman, u-Idris Elba, uJenny Slate
Idunyiswe njengenye yeefilimu eziphambili zePstrong ukuza kuthi ga ngoku - ukuba akunjalo i eyona - Ngaphandle nangaphakathi ithatha ababukeli ngaphakathi kwengqondo yomntwana uRiley. Ngokukodwa, sithathwa sisa kwiziko lolawulo lwengqondo apho iimvakalelo zakhe- uvuyo (Amy Poehler), uloyiko (uBill Hader), Ingqumbo (Lewis Black), Isikizi (Mindy Kaling) kunye nosizi (uPhyllis Smith) -mcebisa kubomi bemihla ngemihla .
Embindini wayo, Frozen Ibali elilula: inkosazana engoyikiyo iyokukhangela udade wayo owahlukanisiweyo ngoncedo lwengcongolo enomqolo, inyamakazi yakhe ethembekileyo, kunye nendoda yekhephu ebuyiselwe ebomini. Nangona kunjalo, yifilimu entle yoopopayi, ingxoxo ekrelekrele kunye nengoma yesandi ebangela ukuba ingaphazanyiswa.
Umdlali weqonga: UKristen Bell, u-Idina Menzel, uJonathan Groff, uJosh Gad, uSantino Fontana
Uhambo luka-Olaf's Frozen
IGroove eNtsha yoMlawuli
Ukuba ukhangele ukuhleka okukhulu, faka oku. Ukupakishwa nge-Disney's signature quip-friendly quips, ecaleni kwe-meta gags ezimangalisayo, i-Emperor's New Groove-ibali lomlawuli we-Incan oguqulwe waba llama-yenye yeendlela ezilungileyo zokuhlekisa kwiDisney Plus. Kuninzi-phantsi.
Umdlali weqonga: UDavid Spade, uJohn Goodman, uEartha Kitt, uPatrick Warburton, kunye noWendie Malick
I-Emperor's New Groove 2: Kronk's Groove eNtsha
Phambi kokuba akhululwe, uninzi lwaxela kwangaphambili ngokuza kwexesha lobudala- ibali lika-Mia wase-US lokufunda ukuba yindlalifa yobukumkani base-Europe-liyakuba kukusilela ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukusebenza okuphumeleleyo ku-Anne Hathaway okhokelayo kunye neskripthi esenziwe ngobuchule esiphumelele kubaphulaphuli kwaye waguqula imovie yangoku yakudala.
Amanqaku aphambili: U-Anne Hathaway noJulie Andrews, Héctor Elizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore, Caroline Goodall
I-Princess Diaries 2: Ukuzibandakanya kwasebukhosini
Nangona i I-2020 inyathelo lokuthatha isenzo ngoku iqulethe iziqwenga zemesmerizing, ilahlekile izithako ezimbalwa ezilahlekileyo ezenze i-Mulan ka-1998 ukuba ikhunjulwe ngothando: iingoma ezingalibalekiyo zokucula, ukuthanda umdla uCaptain Li Shang kwaye, kunjalo, Mushu inamba. Ukusuka kubalingisi ukuya ekuhlekiseni i-Mulan yoqobo ngumboniso bhanyabhanya onobuhlobo osapho.
Iimbalasane: UMing-Na Wen, uEddie Murphy, uMiguel Ferrer kunye noBD Wong
Kunye Gxila kuPocus 2 ngokusemthethweni iluhlaza ukukhutshwa kweDisney Plus kwikamva, lixesha lokuba uphinde utyelele oodade baseSanderson, amagqwirha aqhubeka ephila ngokufunxa imiphefumlo yabantwana. Ngaba abakwishumi elivisayo ababini kunye nekati ethetha bangabayeka? Asizukuyonakalisa, kodwa le yimiboniso bhanyabhanya enokubukelwa nangaliphi na ixesha lonyaka- nokuba kungenxa kaBette Midler ocula u-Spell on You.
Inkwenkwezi: uBette Midler, uSarah Jessica Parker, uKathy Najimy
Abagibeli: Umdlalo wokugqibela
Eyona bhanyabhanya yincwadi yamahlaya, i-Endgame izisa isisa sikaMarvel esingapheliyo ngomlo oyindumasi phakathi kwe-supervillain Thanos kunye namagorha omeleleyo omhlaba. Skrolela ezantsi kuluhlu olupheleleyo lweMarvel.
Inkwenkwezi: URobert Downey Jr, uChris Evans, uMark Ruffalo, uChris Hemsworth, uScarlett Johansson, uJeremy Renner, uBrie Larson, uKaren Gillan, uJosh Brolin
Ichazwe njengethenda kunye ne-offbeat yokuza-yobudala bebali, le Disney Plus yoqobo isekwe kwiNew York Times ethengisa kakhulu inoveli yabantu abadala enegama elifanayo. Ilandela inkqubela phambili yokuzithemba kunye nemibala ye-Stargirl Caraway, etshintsha ubomi bomnye umfundi uLeo Borlock.
Inkwenkwezi: UGrace VanderWaal, Graham Verchere, Giancarlo Esposito, Karan Brar, Darby Stanchfield
Umbala, umdla kunye nolonwabo: Ragnarok yayilutshintsho olukhulu kwiifilimu ze-Thor zangaphambili. Olu fakelo kwi-franchise lulandela umkhosi wombane njengoko ezama ukuthintela i-Ragnarok - ukuphela kwempucuko yase-Asgardian - ezandleni zikaHela ongenanceba.
Inkwenkwezi: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Ubukhosi buBuya umva
Ufakelo oluthandayo lwendawo ye-saga yabalandeli abaninzi be-Star Wars, indlela emnyama eya ku-A New Hope ibona uJedi Luke Skywalker ethatha ubukhosi obunobuqili bukaDarth Vader, ngoncedo lwabahlobo uHan Solo kunye nePrincess Leia - kunye nomcebisi omtsha uYoda. Singacebisa ukuba neempelaveki ezinde ezimnandi zeemovie ze-Star Wars. Uluhlu olupheleleyo lungezantsi, skrolela ezantsi.
Inkwenkwezi: UMark Hamill, uHarrison Ford, uCarrie Fisher, uBilly Dee Williams, uAnthony Daniels, uDavid Prowse, uKenny Baker
Le Disney animated adventure ibonisa uDwayne 'Iliwa' uJohnson njenge demigod yokucula. Kwaye ukuba ufuna esinye isizathu sokubukela, ibali le-teular teen ekhethwe lulwandle uqobo ukudibanisa into eyimfihlakalo nothixokazi uTe Fiti, yenza UMoana kufanelekile ukuba ubukele.
Inkwenkwezi: UDwayne Johnson, uRachel House, uTemuera Morrison, uJemaine Clement, uNicole Scherzinger, uAlan Tudyk
IHero enkulu 6
Sukuba nexhala, khange uphoswe ziifilimu ezintlanu zokuqala. IHero enkulu ye-6 isekwe kwi-comic Marvel enegama elifanayo, ibali likaHiro Hamada, umlingisi weerobhothi ojoyina iqela lamanye amaqhawe aphezulu obuchwephesha.
Amanqaku: UScott Adsit, uRyan Potter, uDaniel Henney, TJ UMiller, uJamie Chung
Enye yeefilimu ezitshintshileyo zomzimba oza kuzibona (uxolo, UJumanji ), oku kubuyiswa kweklasikhi ye-1976 ibona ugqirha othe tye u-Tessa kunye nentombi yakhe, abanomdla kwi-rock elivisayo u-Anna, bavuka ngaphakathi emzimbeni womnye nomnye.
Inkwenkwezi: UJamie Lee Curtis, uLindsay Lohan, uHarold Gould, uChad Michael Murray
Ibali loodade ababini abafanayo (bobabini badlalwe nguLindsay Lohan omncinci) bohlukene ekuzalweni kwaye baziswa sisikimu sokudibanisa abazali babo abaqhawule umtshato.
Inkwenkwezi: uLindsay Lohan, uDennis Quaid, uNatasha Richardson
Abantwana be-90's sele beqhelene noGeorge weJungle, kodwa iDiszop yaseTarzan enomtsalane ifanelwe ukwaziswa kwisizukulwana esilandelayo. Iinkwenkwezi zefilimu UBrendan Fraser kwinkulumbuso yakhe ezukileyo kwaye upakisha eminye imidlalo ehlekisayo, kubandakanya uJohn Cleese njenge gorilla yezifundo egama linguApe.
UBrendan Fraser, uLeslie Mann, iThomas Haden Church, uRichard Roundtree
Ngubani owenze uRoger Rabbit?
Eli hlaya livuyiswayo lisuka ku-Buyela kumlawuli wexesha elizayo uRobert Zemeckis wothusa abaphulaphuli ngeziphumo zalo ezibonakalayo ngo-1988 kwaye bahlala benomdla kakhulu ukuza kuthi ga namhlanje. Iinkwenkwezi zikaBob Hoskins njengomcuphi wabucala u-Eddie Valiant, owela iindlela ngenani labalinganiswa bekhathuni ukuze afike ezantsi ekubulaweni okungummangaliso.
Amanqaku aphambili: Bob Hoskins, uChristopher Lloyd, uJoanna Cassidy, uCharles Fleischer
Incwadi yeJungle (2016)
UMlawuli uJon Favreau uphefumlela ubomi obutsha kwenye yeefilimu ezingoopopayi zeDisney. Incwadi yeJungle ineempawu ezibonakalayo ezintle kunye nokulandelelana kwamanyathelo.
Umdlali omncinci uNeel Sethi wenza umsebenzi obalaseleyo njengoMowgli, ebambe eyakhe ngokuchasene nelizwi elineenkwenkwezi eziquka uBill Murray, uLupita Nyong'o, uScarlett Johansson, u-Idris Elba noChristopher Walken.
Umdlali weqonga: uNeel Sethi, uBill Murray, uBen Kingsley, u-Idris Elba
Iyafumaneka ukubukela kwiDisney Plus UK
IiMuppets zifunwa kakhulu
Olunye lweeholide zakutshanje kwifayile ye- IiMuppets Imbali ende kunye nebalaseleyo, ii-Muppets zifunwa kakhulu zibona abalinganiswa abathandekayo bexubene nolwaphulo mthetho lwamanye amazwe. URicky Gervais kunye noTina Fey bathatha iindima eziphambili phakathi kwe-A-list cameos, njengoko uDermpelgänger okhohlisayo kaKermit esenza umonakalo kwiqela lehlabathi.
Inkwenkwezi: URicky Gervais, uTy Burrell, uTina Fey, uSteve Whitmire
Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeefilimu ezinkulu zikaPstrong, uPhezulu loloyiso kwaye ngokungathandabuzekiyo yeyona iinyembezi zabo ezinkulu ukuza kuthi ga ngoku. Indoda endala imisele ukuhlonipha umfazi wayo ongasekhoyo ngokuya kwi-adventure ababehlala bethetha ngayo, bengaqondanga bethatha inkwenkwana encinci enomdla kunye naye. Uhambo lwabo oluyingozi lusuka entliziyweni kwaye luhlekisa, kufuneka ubukele ngokupheleleyo.
Iimbalasane: U-Edward Asner, u-Jordan Nagai, uJohn Ratzenberger, uChristopher Plummer
Imbovane-Man kunye noNomeva
Phakathi kweekona ezininzi ezahlukileyo zeMarvel Cinematic Universe, u-Ant-Man wenze umzobo omncinci ngokufanelekileyo. Ukhenketho lwesibini lukaScott Lang uyambona edibana nelangatye langaphambili uHope van Dyne ukuba alwe nomntu omtsha ongaqondakaliyo. UPaul Rudd uyathandeka njengenye inkwenkwezi elahlekileyo u-Evangeline Lilly, ngelixa uMichael Peña ehlala engumntu obamba intshontsho njengomhlobo wabo uLuis.
Inkwenkwezi: UPaul Rudd, uEvangeline Lilly, uMichael Peña, uWalton Goggins
Ubukhosi bamaphupha: Ibali le-Star Wars Trilogy
Abalandeli beStar Wars abayi kuba nakho ukumelana noku kujonga nzulu ekwenzeni i-trilogy yoqobo, kubandakanya nefilimu yokuqala yemveliso edumileyo enengxaki. Ukubandakanya udliwanondlebe nomdali uGeorge Lucas kunye neenkwenkwezi uMark Hamill, uHarrison Ford kunye noCarrie Fisher, i-Empire of Dreams ibonelela ngengqondo engazange ibonwe kwezinye zeefilimu ezinempembelelo kakhulu ngalo lonke ixesha.
Umdlali weenkwenkwezi: UMark Hamill, uHarrison Ford noCarrie Fisher
X-Men: Iintsuku zeXesha elidlulileyo
Xa abantu bethetha ngeyona midlalo bhanyabhanya ibalaseleyo yakha yenziwa, X-Amadoda : Iintsuku zeXesha elidlulileyo zifanelwe ukukhankanywa. Ikomityi eneenkwenkwezi zeefilimu zantlandlolo kunye nezinto zangaphambili ezijoyina imikhosi yexesha lokuhamba, elinexesha elinomvuzo kubalandeli bezilwanyana. Ngokuqinisekileyo, i-franchise bekufanele ukuba iphele apha kwinqaku eliphezulu leemeteor.
Inkwenkwezi: UPatrick Stewart, u-Ian McKellen, uHugh Jackman, uJames McAvoy, uJennifer Lawrence
Ifilimu yosapho ekrelekrele egcwele intliziyo, iiHole zilandela uStanley Yelnats (odlalwa ngumncinci UShia LaBeouf ), ulutsha olunethamsanqa olugwetyelwe iinyanga zokuvalelwa eCamp Green Lake ngolwaphulo-mthetho angalwenzanga. Kulapho yena namanye amabanjwa ayanyanzelwa ukuba enze umhlakulo kwimingxuma entlango ngenxa yento ebonakala iyinjongo ekhethekileyo. Libali esifungayo uzakumba.
Inkwenkwezi: UShia LaBeouf, uSigourney Weaver, uJon Voight
Lilo kunye noStitch
Inomtsalane- kodwa ngamanye amaxesha enobukrakra- umphambukeli oluhlaza okwesibhakabhaka yinkwenkwezi yeli xesha lika-2002, Lilo kunye noStitch , Ebona isidalwa esinomdla siphuma kwilebhu apho wayehlengahlengiswa khona kwaye wenza ubuhlobo obungenakulindeleka nentombazana encinci yaseHawaii.
Inkwenkwezi: UDaveigh Chase, uChris Sanders, uTia Carrere, uDavid Ogden Stiers
Iinkwenkwezi zika-Glenn Vala njenge-iconic baddie Cruella De Vil kule remake ye-animation ethandwayo yango-1961, eyazisa inyathelo phambili (ngelo xesha) lanamhlanje kunye noJeff Daniels, uJoely Richardson noHugh Laurie.
Inkwenkwezi: UGlenn Vala, uJeff Daniels, uJoely Richardson, uJoan Plowright, uHugh Laurie
Ubuhle kunye nesilwanyana (2017)
Ukuphinda kwenziwe isenzo sokuphakanyiswa kuka-Oscar okonyulwe ngo-1991 yayiyinto eyothusayo kwiDisney- kunye noEmma Watson ababonisa umdla kwindima ye-Belle kunye neqela elomeleleyo lomculo kubandakanya u-Ewan McGregor, u-Ian McKellen no-Emma Thompson.
Inkwenkwezi: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ian McKellen
Ibhokisi enkulu yeofisi ye-Disney ye-live-action era, i-Guy Ritchie ekhangayo kwi-street-rat-turned-Arabian-Prince tale iya kubathanda abalandeli be-cartoon ka-1998 kunye ne-newbies ngokufanayo. Hayi, isenokungabi ntle njengaleyo yoqobo - Ngaba u-genie o-blue-tinted genie akanakuze afikelele kwinqanaba lika-Robin Williams, andithi? -Kodwa i-2019's Aladdin ayisiyi kuphoswa. Amagqabantshintshi abandakanya ukuvakala kwesandi esihlaziyiweyo, iziphumo ezibonakalayo ezibonakalayo kunye nokusebenza kwentsebenzo yokubamba incekukazi kaJasmine uDalia (Nasim Pedrad).
Inkwenkwezi: Ngaba nguWill Smith, uMena Massoud, uNahomi Scott, uMarwan Kenzari
I-Cool Runnings yimbali ehlekisayo ye-underdog yeqela laseJamaican elikhuphisanayo elalikhuphisana kwii-Olimpiki zasebusika zowe-1988 eCalgary iseyeyona bhanyabhanya iphambili i-90s- Yiva iRhythm! Yiva iRhyme! Vuka, lixesha eligutyungelweyo!
Inkwenkwezi: UJohn Candy, uLeon, uDoug E.Doug, uRawle D. Lewis
URobin Williams ukwifom e-ome njengeyodwa kule ngqungquthela yeFlubber- ebhalwe nguJohn Hughes- egxile kuprofesa ophambeneyo odala into engaqondakaliyo efana nerabha ngelixa azama ukwenza umthombo wamandla omtsha.
Inkwenkwezi: URobin Williams, uMarcia Gay Harden, uChristopher McDonald, uTed Levine
Masikhuphe oku ngoku: UTim Burton Ukuthatha ibali eliqhelekileyo likaLewis Carroll nguTim Burton kakhulu. Ukutyhilwa kwimifanekiso ye-gothic kunye nokwahluka kwemibala ephezulu, yinto ebonakalayo yabaphulaphuli-enye ebonisa ukusebenza kukaJohnny Depp njengeMad Hatter.
Inkwenkwezi: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway
I-Hunchback yeNotre Dame
Enye yeendlela ezininzi zexesha lokuvuselelwa kweDisney kwiminyaka ye-90s, iHunchback yeNotre Dame isekwe kwinoveli eyaziwayo nguVictor Hugo kwaye ibalisa ibali likaQuasimondo - intsimbi ebetha intsimbi eyoyisa iintsilelo zakhe ukunceda intombazana yaseRoma ebizwa ngokuba yi-Esmerelda .
Inkwenkwezi: Demi Moore, Jason Alexander, Mary Kay Bergman, Corey Burton
IAtlantis: Ubukhosi obulahlekileyo
Mhlawumbi olona phawu luphantsi lweDisney oluphantsi kwePlanethi yeTreasure, le sci-fi adventure ingena ebomini bomzobi weemephu uMilo James Thatch (evakaliswe kwimfezeko nguMichael J Fox) kunye nokuzingela kwakhe isixeko esingaphantsi kwamanzi. Yimishini emzisa ukuba adibane neqela kubandakanya inkokheli ye-Commander u-Lyle Tiberius Rourke, ingcali yokudilizwa kwe-Italiya u-Vinny Santorini, amayeza u-Dr Sweet kunye ne-geologist yase-France u-Gaetan Mole Molière. I-Atlantis: Ubukhosi obulahlekileyo buyabonakala kwaye buzoba kakuhle.
Siza kuyikhupha ngoku le ndlela: ewe, le yeyona bhanyabhanya ibonakale ngathi ayinasibheno sinomtsalane kuRichard Madden, owaziwa kakhulu ngendima yakhe kwi-Bodyguard nakwiGame of Thrones. Kodwa eli nyathelo lihlaziyayo lokuphila lithatha i-fairytale exelelwe kakhulu liselifanele ixesha lakho. Ngoba? ULily James akabonisi nje ngomsebenzi wobugqi njengenkosazana eyaziwayo, kodwa uCate Blanchett otyhafisayo uyakhanya njengoomama abakhohlakeleyo. Phosa ku-Helena Bonham Carter njengo-Fairy Godmother onobuhle kwaye unokholo oluthembekileyo, olupheleleyo kwaye-okona kubaluleke kakhulu-kukuzonwabisa okudala.
Inkwenkwezi: uLily James, uCate Blanchett, uRichard Madden, uHelena Bonham Carter
UMary Poppins ubuya
U-Emily Blunt wayenezihlangu ezikhulu zokugcwalisa le ndlela ye-2018 yomculo we-1964, kodwa wazisa umdlalo onomtsalane njengomlingiswa oyintloko. I-cameo evela kuDick Van Dyke yenye yezona zinto zibalaseleyo kwifilimu emnandi ezaliswe ngamanani aphezulu omculo.
Inkwenkwezi: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer
Sithandwa sam, ndibanqumle abantwana
Ngokuqalisa kwakhona kwimisebenzi, unesizathu esifanelekileyo sokuphinda ujonge le fashoni yakudala yeDisney. Ngelixa lifutshane kwiziphumo ezizodwa eziqinileyo, eli bali lilula lokuhla kwe-ray lihambe gwenxa liya kuba nomtsalane ebantwaneni nakubantu abadala ngokufanayo. Sthandwa sam, ndizinqumle iinkwenkwezi ze-Kid s uRick Moranis njengoWayne Szalinski, isazinzulu se-wacky esiye savelisa umatshini we-electromagnetic owenza abantu babe microscopic - njengokuba abantwana babamelwane bakhe befumanisa emva kokuba ebenze ngengozi ukuba bangabavumeli iMicronauts.
Inkwenkwezi: URick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman
Olunye ungeniso lwakutshanje kwi-canon ye-princess ye-Disney, uTangled uxelela ibali eliqhelekileyo likaRapunzel - intombazana ebalekayo ekuthinjweni ngenxa yeenwele zakhe ezinde kakhulu kunye nesela elinentliziyo entle.
Inkwenkwezi: UMandy Moore, uZachary Levi, uDonna Murphy, uRon Perlman
Iimpawu ezibonakalayo? Jonga. I-stellar cast kubandakanya uJeff Bridges kunye noMichael Sheen? Jonga. Ngaba sisandi esiqinisekileyo sokuntywila esivela kuDaft Punk? Ngokuqinisekileyo! I-Sequel ukuya kwi-semin ye-1982 sci-fi Tron, Ilifa liphinda liqale igridi, umda oqaqambileyo wedijithali oqaqambileyo apho yonke ingcinga kunye nokuvavanywa kunokuqhubeka ngesantya esikhawulezayo. Kulapha apho uSam Flynn akhangela utata wakhe olahlekileyo, uKevin Flynn, ophambili kwimovie yokuqala (waphinda wadlalwa nguJeff Bridges). Ngamafutshane: ukuba ujonge ifilimu ye-adrenaline eneempawu ezibonakalayo ezibonakalayo, iTron: Ilifa lelakho.
Inkwenkwezi: UJeff Bridges, uGarrett Hedlund, uOlivia Wilde, uBruce Boxleitner
Ngaba ikhona iAtlantis? Yile nto ilivo laseHollywood uJames Cameron azama ukuphendula kulo mbhalo-ubude obubhaliweyo besebenzisa ifilosofi yamaGrike uPlato njengemephu yobutyebi ebonakalayo. Ngaba uyasifumana isixeko esilahlekileyo kwaye sixhawule impucuko entsha? Ngenxa yokunqongophala kwezihloko malunga nokufumanisa okunjalo, unokuqikelela impendulo. Nangona kunjalo, loo nto ayenzi le movie-leyo isuka eGrisi iye kuLwandlekazi lweAtlantic, iphonononga ngomhlaba, ulwandle kunye nomoya- nayiphi na into ebangela ukuba ucinge.
Inkwenkwezi: James Cameron
Kubo bonke abo bangekamboni uNksk Doubtfire: yeka lento uyenzayo. Tshintshela ifowuni yakho kwimowudi yendiza. Beka inja yakho endlwini yenja. Thumela abantwana phezulu. Yenza nje nantoni na oyifunayo ukuze ubukele lo msebenzi wobugcisa kaRobin Williams ungaphazanyiswa. Kwimisebenzi yakhe emikhulu, lo mdlalo weqonga ulandela uDaniel, owayesemsebenzini kunye nomdlali weqonga osandula kuqhawula umtshato enxiba njengabantu abadala- kunye nomntu obhinqileyo ongumgcini wendlu waseScotland ukuchitha ixesha elininzi nabantwana bakhe. Ukupakisha ukuhleka-kuninzi, ibali elibukekayo linendawo efudumeleyo, egxile ekubalulekeni kosapho.
Inkwenkwezi: URobin Williams, uSally Field, uPierce Brosnan
Ibali lokudlala 4
I-epilogue esasingazi ukuba siyayidinga, yesine kwaye yenziwe kakuhle Ibali lethoyi isonga isaga yoopopayi ngohambo lwendlela kunye nokujika okungalindelekanga. Kubalandeli beefilimu zangaphambili, ibali leToyi 4 lisebenza ukubuya kukaBo Peep, ngelixa bonke ababukeli beza kuthandana noForky, into yokudlala entsha eyenziwe nge-spork kunye nococi lombhobho (ufunda njalo). Nangona sinokuthembisa ukuhleka kuyo yonke indawo, ngokuqinisekileyo asinakuqinisekisa ukuba isiphelo esingokweemvakalelo siya kukushiya unamehlo owomileyo.
Inkwenkwezi: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale
Uhlengahlengiso lwefilimu yothotho lweencwadi ezithandekayo uye waba ngumdlalo bhanyabhanya wokuqala weDisney yokuyeka ukukhutshwa kwindawo yeqonga phakathi kwesifo secoronavirus, esiya ngqo kwiDisney Plus endaweni yoko. Umhla wokukhululwa awukaqinisekiswa kuArtemis Fowl, kodwa abalandeli ngokuqinisekileyo baya kuvuya ukuba ekugqibeleni babone umphathi wolwaphulo-mthetho kunye neefiriyisi ekufuneka ejongane nazo ukuze ahlangule utata wakhe aphile- nokuba ikwisikrini esincinci kakhulu kunokuba bekucwangcisiwe.
Umdlali weenkwenkwezi: UJudi Dench, uColin Farrell, uNonso Anozie, uJosh Gad, uFerdia Shaw
Iifilimu ezimangalisayo kwiDisney Plus UK
Ngezihloko ezitsha eziza kongezwa, iDisney Plus ithembisa ukusingathwa kwesininzi IMCU :
Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo
UCaptain America: Imfazwe yamakhaya
UCaptain America: uMphindezeli wokuqala
UCaptain America: Ijoni lasebusika
Abagcini beGlass Vol. 2
Indoda yentsimbi 2
Indoda yentsimbi 3
Abaphindezeli beMarvel: Ubudala be-Ultron
Thor: Ihlabathi elimnyama
Ewe ayibikho kulandelelwano lokubukela…
Iimuvi zeMfazwe Star kwiDisney Plus
Ngethamsanqa, awudingi ukubhabhela kumnyele okude kakhulu ukuze ubone Idabi leenkwenkwezi isaga. Ewe uninzi lwayo, kunjalo.
Nantsi into enikwayo:
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu I: Isoyikiso sePhantom
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu II: Ukuhlaselwa kweeClones
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu III: Impindezelo yeSith
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu IV: Ithemba elitsha
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu V: Ubukhosi buBuya umva
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu VI: Ukubuya kweJedi
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu VII: Umkhosi uyavusa
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu VIII: IJedi yokugqibela
Solo: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Iimfazwe zeClone
Ubukhosi bamaphupha: Ibali leThe Star Wars Trilogy
Ukuba uyazibuza ukuba yeyiphi iodolo yokubabukela kuba masijongane nayo, inokuba yimpikiswano, sinesikhokelo kuyo indlela yokubukela i-Star Wars ngokulandelelana . Isilumkiso: Kuya kufuneka ulinde kancinci ukuze ubukele iRise of Skywalker, ayikabikho kwiDisney Plus UK okwangoku.
Iifilimu zePstrong kwiDisney Plus UK
Ewe, iDisney ikwangumnikazi wayo uPstrong, abantu abasemva kokuthandwa kweBali yeToyi kunye nangaphakathi ngaphandle. Sonke siyazi ukuba siyabetha Ibali lokudlala 4 kamsinya nje xa sinako, nangona ufuna isikhalo yiya kwiBali leToyi 3 (asikadluli kuloo ndawo ikhathazayo). Nazi iindlela zePstrong kwiDisney Plus UK.
Ibali lokudlala 2
Ibali lezinto zokudlala 3
Imbuyekezo Monsters, Inc.
Iimpawu ezimangalisayo 2
Bhalisela iDisney Plus nge- $ 7.99 ngenyanga okanye nge- £ 79.90 ngonyaka
Jonga ifayile Olona luhlu lubalaseleyo kwiDisney Plus -Okanye ubone ukuba yeyiphi enye into eyenzekayo ngelethu Isikhokelo seTV
Ifilimu eyaziwayo yemibuzo
IiPros and Cons of Iimali-mboleko ezimbi kunye nePayday Loans
Ugqirha Ngubani: Bonke ooGqirha bayamanyana- uhlobo - lomzobo omtsha wokutshixa
liverpool v watford tv channel
ungadlala phakathi kwethu kwiNintendo switch
izitulo ezijingi zangaphandle
kubuya nini ukufa eparadesi
I-ajax vs tottenham iyonke imidlalo
ingelosi 3 intsingiselo